Home Wararka Xisbiga Wadani oo ku horreeya natiijada Doorashada Somaliland
Xisbiga Wadani oo ku horreeya natiijada Doorashada Somaliland
Deegaanada kala duwan ee maamulka Somaliland waxaa weli ka socota tirinta codadka doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo Isniintii la soo dhaafay si habsami leh uga dhacday magaalooyinka maamulkaasi.
Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa shaaciyey natiijada Golaha Wakiillada gobolka Togdheer, waxaana hoggaanka u hayo xisbiga Waddani oo bilihii ugu dambeeyey halkaas ka wado olole xooggan, waxaana codadka loo kala helay sidan:
Sidoo kale Natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Borama xisbiyada Kulmiye iyo Waddani ayaa ka helay tiro xildhibaano ah oo 5 iyo 5 ah halka xisbiga UCID uu helay 3 xildhibaan.
Natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Burco ayaa waxaa hoggaaminayo xisbiga Waddani oo helay 5 xildhibaan halka xisbiyada UCID iyo Kulmiye ay kala heleyn min 4 xubnood .
Waxaa ilaa hadda la shaaciyey 39 xildhibaan oo saddex Gobol ka yimid, kana tirsan Golaha Wakiilada, waxayna xisbiyada u kala heleyn sidan:
Isu geyn: 39
Tirada Guud ee Golaha Wakiilada Somaliland waa 82 xildhibaan; Waxaa la sugayaa natiijada Gobollada: Saaxil (10), Awdal (13) iyo Maroodijeex (20).